About | The World of Pinkgold
လူပေါင်း သန်းခြောက်ထောင်ကျော်ထဲက ဘာမှမဟုတ်တဲ့ အညတရ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ပါ။ သာမန်ဘ၀တွေထဲက သာမန်ကိစ္စတွေကြားမှာ သာမန်အလုပ်တွေနဲ့ပဲ ရှင်သန်နေထိုင် နေပါတယ်။
လင်းအရုဏ် on February 25, 2009 at 6:50 am said:
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပုံဖော်ထားပုံက ကောင်းပါ့ဗျာ။ အညတရမိန်းကလေးလည်း ကမ္ဘာကြီးအတွက် မရှိမဖြစ်ပါပဲဗျ။
nay min on April 19, 2009 at 9:35 am said:
မြန်မာအမျိုးသမီးလေးတစ်ယောက် အတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ချင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
အချိန်ရမယ်ဆိုရင် မေးလ်သော်လည်းကောင်း၊မက်ဆေ့စ်သော်လည်း ကောင်း ပို့ပေးပါ။
Ye' Paing Phyo on June 9, 2009 at 1:51 pm said:
I hope to you as my sister or guiding star. You are mature girl . Our country need as you.
kks on July 15, 2009 at 2:25 pm said:
bob on July 24, 2009 at 2:36 pm said:
ကောင်းပါပေတယ်ဗျာ..ကိုယ့်ကို ကိုယ် တော်တော်လေး အမွှန်းတင်ထားတာပဲ…ဒီလောက်အရည်အချင်တာ…လုံလောက်ပါတယ်…နောက် ဆက်လေ့လာ..ဆက်ကြိုးစားနေတယ်လို့လည် ရုံကြည်ပါတယ်
mevision on November 3, 2009 at 4:54 pm said:
မပင့်ဂိုးရေ …ဘလော့ထဲမှာ နာမည်ကြီးပြီး အပြင်က့်သင်တန်းမှာ တွေ့ ဖူးထဲက လေးစားပါတယ်နော်….မပင့်က ကျွန်မကို မသိပေမယ် မပင့်ကို အပြင်မှာ တွေ့ ဖူးလို သိနေတယ်… မပင့်ဂိုးရဲ့ စာတွေ လေ့လာတာချင်း လိုင်းချင်းတူလို့ အားပေးနေတဲ့သူ
မပင့်ဂိုးရေ …ဘလော့ထဲမှာ နာမည်ကြီးပြီး အပြင်ဘက့်သင်တန်းမှာ တွေ့ ဖူးထဲက လေးစားပါတယ်နော်….မပင့်က ကျွန်မကို မသိပေမယ် မပင့်ကို အပြင်မှာ တွေ့ ဖူးလို သိနေတယ်… မပင့်ဂိုးရဲ့ စာတွေ လေ့လာတာချင်း လိုင်းချင်းတူလို့ အားပေးနေတဲ့သူ
သိ င်္ဂါရ on November 26, 2009 at 7:17 am said:
Dear Pink Gold;
I was arrived just now. But I’ve already known you asablogger (that the men I really admire) at MBS. Nice to meet you at your blog. Pls come & visit to my site. So thanks.
P.S: let me addalink as your site to my blog.C U.
ဘရာဗို on November 27, 2009 at 1:38 pm said:
ဟုတ်ကဲ့ သာမာန်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အရေးသားတွေကလည်းဖတ်လို့ကောင်းနေခဲ့ပါတယ်ဗျာ
ReadersHeaven on September 23, 2010 at 12:38 pm said:
shweBeauty on April 27, 2011 at 5:17 am said:
sis ရဲ့အလှအပ နဲ့ ဆိုင်တဲ့ post တွေကို ကြိုက်လို့shweBeauty မှာ လာရေးဖို့ဖိတ်ချင်လို့ ပါ။ sis စိတ်ဝင်စားရင် admin@shweBeauty.com ကို ဆက်သွယ်လိုက်ပါနော်။ sis ရဲ့ ရေးပြီးသား post တွေကို တင်ရင်လည်း ရပါတယ်။ ကျေးဇူး sis ရေ